👍သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ထဲမှ ဝယ်ချင်သူများအတွက်👍 🏡🏡Sqft(1870) ကျယ်ဝန်းပြီး အိပ်ခန်း 3ခန်းပါ ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုလေး ရောင်းပေးပါ့မယ်။🏡🏡 👍နေရာကောင်း လူစည်တဲ့ နေရာလေးပါနော် 👍 👍လမ်းလည်ကျယ်တယ်နော်👍 👏#ဖွဲစည်းပုံများ# 👉 2Master bedrooms 👉 ...
~ Good Place ~ 【Followed by English message】 ⏩ အိမ်ခြံမြေစာရင်းအမှတ် > ( RN - 12451 ) 🏩🏩 ထပ်ခိုးပါ မြေညီထပ် ထောင့်ခန်း အရောင်း 🏩🏩 နေရာ - အလုံ မြို့နယ် အဆောက်အဦးအမျိုးအစား - တိုက်ခန်း အလွှာ - မြေညီထပ် + ထပ်ခိုး အခန်းအမျိုးအစား - Single Room ၄ ...
👍ဒဂုံမြို့နယ်ထဲမှ ဝယ်ချင်သူများအတွက်👍 🏡🏡Sqft(1800) ကျယ်ဝန်းပြီး အိပ်ခန်း 3ခန်းပါ ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုလေး ရောင်းပေးပါ့မယ်။🏡🏡 👍နေရာကောင်း လူစည်တဲ့ နေရာလေးပါနော် 👍 👍လမ်းလည်ကျယ်တယ်နော်👍 👏#ဖွဲစည်းပုံများ# 👉 2Master bedrooms 👉 1Single ...
Rent For Apartment Sanchaung Township Location: U Phee Street , Sanchaung Township,near Asia Royal Hospital Floor: 5th,Floor Room:1,Master Bedroom...1,Bedroom...Parquet Flooring and 3,Aircons...Waterheater...Pressure Pump Size: 1250, Sqft Price: ...
LT1905005825:3bedrooms unit for sale in Bahan
LT1905005825:3bedrooms unit for sale in Bahan * Location - Bahan (Golden Royal Sayar San Condo) * Living area - 1,547 sq-ft * 1 master bedroom *2single bedrooms * Living room, dining and kitchen *2bathrooms * Partial furnished * Hot Water ...
🎉🎉** လမ်းမတန်းအနီး(နေရာကောင်း)တွင် ရောင်းရန်ရှိသော လုံးချင်း/မြေကွက်အရောင်းစာရင်းများ..**🎉🎉
🎉🎉** လမ်းမတန်းအနီး(နေရာကောင်း)တွင် ရောင်းရန်ရှိသော လုံးချင်း/မြေကွက်အရောင်းစာရင်းများ..**🎉🎉 1. မရမ်းကုန်း၊ ပါရမီရိပ်သာ 2000 Sqft RC-2၊ ဘိုးဘွား(အမည်ပေါက်) သိန်း 4500(ညှိနှိုင်း) ( HS-044994) 2. မရမ်းကုန်း၊ ရွှေနှင်းဆီ ပေ(55×100) RC-2၊ ...
👍စမ်းချောင်းမြို့နယ်ထဲမှ ဝယ်ချင်သူများအတွက်👍 🏡🏡Sqft(1800) ကျယ်ဝန်းပြီး အိပ်ခန်း 4ခန်းပါ ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုလေး ရောင်းပေးပါ့မယ်။🏡🏡 👍နေရာကောင်း လူစည်တဲ့ နေရာလေးပါနော် 👍 👍လမ်းလည်ကျယ်တယ်နော်👍 👏#ဖွဲစည်းပုံများ# 👉 1Master bedroom 👉 3Single ...
👍စမ်းချောင်းမြို့နယ်ထဲမှ ဝယ်ချင်သူများအတွက်👍 🏡🏡Sqft(2000) ကျယ်ဝန်းပြီး အိပ်ခန်း 4ခန်းပါ ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုလေး ရောင်းပေးပါ့မယ်။🏡🏡 👍နေရာကောင်း လူစည်တဲ့ နေရာလေးပါနော် 👍 👍လမ်းလည်ကျယ်တယ်နော်👍 👏#ဖွဲစည်းပုံများ# 👉 1Master bedroom 👉 3Single ...
🙏🏻မင်္ဂလာပါရှင် 🙏🏻 🍀 မဟာအောင်မြေမြို့နယ်🍀 ✍🏼S ( 573 ) 🛣 ( 84 ) လမ်းမကြီးအနီး 🏠 အိမ် 👉 အရောင်း 👈လေး မိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင် 🤗 🔹 ( 38 ) လမ်းပေါ်တင် 💁‍♀️ မြေညီထပ်( 1 )ခန်း, Master Room(5) ခန်း, Hall ( 1 )ခန်း 📏 ပေ ( 40 x 85 ) , ...
Check this url: https://www.lotayaproperty.com/property-for-sale?page=4